फेसबुक, ट्विटर र गुगलले अमेरिकी सेनेटरको प्रश्नको सामना गर्दै::Jalpa Khabar
फेसबुक, ट्विटर र गुगलले अमेरिकी सेनेटरको प्रश्नको सामना गर्दै
Published on: १३ कार्तिक २०७७, बिहीबार ०८:५४
फेसबुक, ट्विटर र गुगलका प्रमुख कार्यकारीहरूले बुधबार अमेरिकी सिनेटका साढे तीन घण्टा भन्दा बढी प्रश्नहरूको सामना गरे।
वर्तमानमा कम्पनीहरूले तिनीहरूको प्रयोगकर्ताहरूले अनलाइन के पोस्ट गर्दछन्, वा उनीहरूले के छोड्ने र तल लिने भन्ने बारे निर्णय लिने मुद्दामा मुद्दा हाल्न सकिदैन।
केही राजनीतिज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् यो "व्यापक उन्मुक्ति" खराब व्यवहारलाई प्रोत्साहित गर्दछ।
तर मुख्य कार्यकारी अधिकारीहरू भन्छन कि उनीहरूले सामग्रीलाई मध्यम बनाउनको लागि कानुन चाहिन्छ।
डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन दुबैलाई सोधपुछका लागि बोलाउन सहमत भएपछि फेसबुकका मार्क जुकरबर्ग, ट्विटरका ज्याक डोर्सी र गुगलका सुन्दर पिचाईलाई सिनेटमा समक्ष बोलाइएको थियो।
सिनेटरहरू दुबै सेन्सर र गलत सूचनाको प्रसारको बारेमा चिन्तित छन्।
र केहि उद्योग हेर्नेहरू कानूनमा सहमति जनाउँदछन् - जसलाई सेक्शन २३० भनेर चिनिन्छ।
"[यसले] डिजिटल व्यवसायहरूलाई प्रयोगकर्ताहरूलाई चीजहरू पोष्ट गर्न अनुमति दिन्छ तर त्यसको परिणामका लागि जिम्मेवार हुन सक्दैन, यद्यपि उनीहरूले त्यो भाषण प्रवर्धन गर्दछन् वा भद्रगोल गर्दैछन्," येल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक फियोना स्कट मोर्टनले बीबीसीको टेक टेन्ट पोडकास्टलाई बताइन्।
"यो धेरै नै प्रकाशन प्रकारको प्रकार्य हो - र समाचार पत्रहरूमा धेरै फरक दायित्व हुन्छ।
"तसर्थ हामीसँग अलि अलि लुलो छ जुन मलाई लाग्छ हाम्रो समाजको लागि राम्रो काम गरिरहेको छैन।"
सुनुवाइ शुरू भएपछि, श्री जकरबर्ग हराए, समितिको बैठकमा जडान गर्न असमर्थ - रिपब्लिकन सेनेटर रोजर विकरले "सब भन्दा चाखलाग्दो विकास" भने।
तर एक छोटो अवकाश पछि, श्री जकरबर्गले राजनीतिज्ञलाई उनले "काम गरिरहेको छ भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्न" नियममा परिवर्तनलाई समर्थन गर्ने कुरा भने।
प्रस्तुतीकरण खैरो रेखा
धारा २३० के हो?
सेक्सन २३० मुख्य कानुनी सुरक्षा हो जुन सामाजिक नेटवर्कहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो।
यसको मतलब वेबसाइटहरू आफैंमा सामान्यतया उनीहरूमा अवैध वा अपमानजनक चीजहरूको लागि जिम्मेवार छैनन्।
उनीहरूलाई तटस्थ बिचौलियाको रूपमा व्यवहार गरिन्छ - अखबार विक्रेताहरू जस्तो कि सम्पादकहरूले कागजमा के हुन्छ निर्णय गर्छन्।
मूल रूपमा इन्टरनेट प्रदायकको सुरक्षाको तरीकाको रूपमा देखिन्छ, यो फेसबुक, ट्विटर र यूट्यूब जस्ता विशाल साइटहरूका लागि मुख्य ढाल भएको छ, जसले सम्भवतः प्रकाशन अघि उनीहरूको प्रयोगकर्ताहरूबाट प्रत्येक पोस्टको समीक्षा गर्न सक्दैन।
के सोशल मीडिया रिपब्लिकनको बिरूद्ध वास्तवमा पक्षधर छ?
बिग टेक: चट्टान र हार्ड ठाउँको बीचमा
तर राजनीतिज्ञहरु भन्छन कि सेक्शन २३० पुरानो हो।
डेमोक्र्याटले साइटहरूका लागि परिणाम बिना झूट अनलाइनको प्रसारको साथ मुद्दा लिन्छन्।
रिपब्लिकन भन्छन कि बिग टेकले आफ्नो सेडररेशन शक्तिको प्रयोग मानिसहरूलाई सेन्सर गर्न प्रयोग गरिरहेको छ - यो सहमत छैन - तटस्थ रहनु भन्दा सम्पादकीय कलहरू गर्ने।
र दुबै पक्ष सहमत छन् कि तिनीहरू उत्तरदायी सामाजिक नेटवर्कहरू हेर्न चाहन्छन्।
श्री डोरसेले समितिको धारा २३० लाई भनेका थिए "इन्टरनेट बोलीको रक्षा गर्ने सब भन्दा महत्वपूर्ण कानून हो" र यसको उन्मूलनले "इन्टरनेटबाट भाषण हटाउनेछ"।
तर उनले ट्वीटरका नीतिहरूको कार्यान्वयनमा कम्तिमा प्रश्नहरूको सामना गर्नु पर्‍यो किनभने यसले के हटायो वा गलत सूचना लेबल लगायो।
ट्विटरका सीईओ ज्याक डोर्सी एक मोनिटरमा देखा पर्छन् सिनेट वाणिज्य, विज्ञान, र यातायात समितिको अध्यक्ष रोजर विकर (पछाडि) सुन्दा
छवि क्याप्शन डोर्सेय्ले ट्विटरको गलत सूचना नीतिहरूमा प्रश्नहरूको उत्तर दियो
ट्विटरले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको मेल-इन मतपत्रको सुरक्षाको बारेमा पोष्ट राख्ने भनेर प्रश्न गरे तर इरानको अयातुल्ला अली खमानेईले पोस्ट छोड्ने इजरायलको बिरूद्ध हिंसालाई धम्की नदिने धम्की दिए। यसको सेवा सर्तहरूको उल्ल .्घन गरेन।
श्री डोर्सीले ट्विटरले जो बिडेनको छोराको बारेमा न्यूयोर्क पोस्ट लेख सीमित गरेकोमा रिपब्लिकन सेनेटर्सको प्रश्नको सामना पनि गरे।
रिपब्लिकन टेड क्रूजले भने, "न्यु योर्क पोष्ट केवल केहि रण्डम मान्छेले ट्वीट गरिरहेको छैन।"
"नर्कले तिमीलाई कसलाई चुनेको छ र कसले तिमीलाई मीडियाको रिपोर्ट हुन अनुमति दिएको र अमेरिकी जनताले सुन्ने अनुमति पाएकोमा तिमीलाई कसमाथि राख्यो?"
यसैबीच, श्री जुकरबर्गले एफबीआईसँगको "निजी बैठक" बाट खुलासा भएको कम्पनीहरूलाई फुटेको सामग्रीबाट सावधान हुन चेतावनी दिएका थिए।
उनले भने कि फेसबुक र उनीहरुले अरु कम्पनीहरुलाई "ग्रहण गरे" सम्भावित "ह्याक एण्ड लीक अपरेशन" का बारेमा चेतावनी दिएका थिए जुन चुनाव वा चुनावमा अगाडि बढ्ने दिनहरु वा हप्ताहरुमा "लीक" हुने थियो।
"एफबीआईले सुझाव दियो कि हामी उच्च सतर्कता र संवेदनशीलतामा छौं, यदि कागजातको ट्राभ देखा पर्‍यो भने हामीले श that्काका साथ हेर्नु पर्छ कि यो विदेशी हेरफेर प्रयासको हिस्सा हुन सक्छ," उनले भने।
सेक्शन  २३० मा, श्री जुकरबर्गले समितिसत धारा  २३० लाई स्वतन्त्र अभिव्यक्तिलाई प्रोत्साहित गरे र "हामीलाई थाहा भएकै रूपमा इन्टरनेट निर्माण गर्न मद्दत गरे" भने।
तर उनले थपे: "इन्टरनेट पनि विकसित भएको छ।
"र मलाई लाग्छ कि कांग्रेसले कानूनलाई अपडेट गर्नुपर्नेछ, यो सुनिश्चित गर्न कि यो उद्देश्यले काम गरिरहेको छ।"
श्री पिचाई, यद्यपि कडाईले कानूनको रक्षा गरे।
"धारा २३० जस्ता अवस्थित कानूनी फ्रेमवर्कका कारण मात्र जानकारीको विस्तृत श्रृंखलामा पहुँच पुर्‍याउन हाम्रो क्षमता सम्भव छ," उनले भने।
"संयुक्त राज्यले इन्टरनेटको इतिहासको सुरूमा धारा  २३० लाई अपनायो।
"र यो प्राविधिक क्षेत्रमा हाम्रो नेतृत्वको लागि आधारभूत भएको छ।"
दुबै राष्ट्रपति ट्रम्प र उनका चुनावी प्रतिद्वन्द्द जो बिडेनले विभिन्न कारणका लागि धारा  २३०  हटाउने आदेश दिएका छन्।
तर केही डेमोक्र्याटहरूले आफ्नो समयलाई सम्पूर्ण सुनुवाइको आलोचना गर्न प्रयोग गरे जसको चुनावको नजिकै यस्तो स्थिति थियो जुन राजनीतिक चालका रूपमा थियो।
"म शाब्दिक १५ बर्षदेखि धारा  २३० को सुधारको पक्षमा छु," सिनेटका रिचर्ड ब्लूमन्थलले राज्य अटर्नी जनरलको रूपमा आफ्नो समयलाई औंल्याउँदै समितिको भने।
"तर स्पष्टसँग म अप्ठ्यारो छु कि मेरा रिपब्लिकन सहयोगीहरूले यो सुनुवाइ चुनावको केही दिनअगाडि नै गरिरहेका छन्, जब उनीहरू राष्ट्रपति ट्रम्पको व्यवहारप्रति झुकाव र झुकावको लागि यहाँ प्लेटफर्महरूलाई धम्काउने र ब्राउबेट गर्न चाहन्छन्।
"समय अकल्पनीय देखिन्छ।"
उनका सहकर्मी ब्रायन स्काट्जले तीन मुख्य कार्यकारीहरूको बारेमा कुनै प्रश्न सोध्न इन्कार गरे, "किनभने यो बकवास हो", उनले भने: "यहाँ के भइरहेको छ यो समिति र संयुक्त राज्यको सिनेटमा दाग छ।
"हामीले यो सुनुवाइ भनेको के हो कल गर्नु पर्छ।
"यो शम छ।"